Maitiro ekuita kana mumwe wako achikupa mhosva yezvose | Bezzia
Maitiro ekuita kana mumwe wako achikupomera zvese
Maria Jose Roldan | 26/07/2021 22:21 | Psychology
Kupomera mumwe wako nguva dzese pane chero chaunoita chiratidzo chakajeka chekuti chimwe chinhu hachina kumira zvakanaka. Iko kubatwa zvisirizvo padanho remanzwiro iro risina munhu anofanira kutsungirira. Kupomera mumwe wako zvinoreva kutyora tsika dzakakosha sekuvimba kana kudanana.
Munhu anopomera waanoda pane zvese, iye munhu ane chepfu uyo ​​asingakwanise kufara uye nekuzvidzora kwakaderera. Muchinyorwa chinotevera tinokupa yakatevedzana yenongedzo yekutevera muchiitiko chekuti iwe unogovana hukama nemunhu anokupa mhosva yezvose.
1 Nei mumwe ari kupomera nguva dzose
2 Zvekuita nezverudzi urwu rwehunhu
Nei mumwe ari kupomera nguva dzose
Pane zvikonzero zvakawanda zvinogona kuita kuti munhu azviwane achipa mumwe wake mhosva nguva dzose:
Kupomera mumwe munhu nguva dzose, inzira yakajeka yekudzivisa kuve nemhosva kune zvimwe zviito. Pasina mubvunzo chiitiko chakanyatsojeka chekusakura.
Kuva nemhosva kunowanzoitika nekuda kwekusawirirana kwekutaurirana mukati mevaviri. Usati wapomera mumwe wako, zviri nyore kwazvo kugara naye pasi totaura zvinhu zvakajeka.
Izvo zvinogona zvakare kuitika kuti munhu anopomera nguva dzese, uve mumwe munhu anokanganisa asingakwanise kutarisa kupfuura bhatani rako remudumbu. Munhu anonyengerera ndemumwe munhu anotsiva anowana hasha shoma uye anotsvaga chero nguva yekupa mhosva mumwe wake. Nenzira iyoyo vanonzwa zvirinani kunyangwe vachikuvadza zvakanyanya munhu wavanoda.
Zvekuita nezverudzi urwu rwehunhu
Pamberi pezvose, zvinofanirwa kuve pachena kuti hapana munhu anofanirwa kushivirira mumwe waanopomera nguva dzose. Vaviri vacho vanofanirwa kugara vakavakirwa paruremekedzo nekutaurirana uye nekudaro vadzivise huturu hunogona kuitika:
Chinhu chekutanga munhu anoshungurudzwa anofanira kugara padyo nemumwe wake uye nekumuita kuti aone manzwiro aari kuita. Kupomera mudiwa wako hunhu husingafanirwe kushivirirwa chero zvodii.
Kana bato rinoshungurudza risingazive chero nguva kukuvadza kwavari kuita, zvinokurudzirwa kupedza hukama hwambotaurwa. Kupomera inzira yakajeka yekunyengedza iyo iri kure pane izvo zvingafungidzirwe semumwe wako ane hutano.
Kana iwe uchida kuchinja nekuchinja maitiro ako, zvingave zvakanaka kuenda kune nyanzvi nyanzvi inoziva nzira yekumisa huturu hwakadai. Kuti ukunde dambudziko rakadai zvakakosha kuti munhu anonyengera azive kuti ari kuzviita zvisirizvo uye kuti anoda uye anoda kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu.
Muchidimbu, kushandisa mhosva nguva dzose muhukama inzira yakajeka yekushandisa mumwe wako uye kudzivirira chero rudzi rwebasa. Sezvatakambotaura pamusoro apa, hukama hwakanaka hunofanirwa kudzorwa nguva dzese nemhando dzakakosha kudaro sekuvimba, kuremekedza kana rudo. Kana izvi zvikasaitika, iwe unofanirwa kucheka kurasikirwa kwako uye chengeta imwe nhambwe kubva kune munhu ane chepfu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Psychology » Maitiro ekuita kana mumwe wako achikupomera zvese
Kurumidza spaghetti ine zucchini uye chizi
Iyo chena hembe, mubatsiri mukuru kupedzisa hembe dzako